Somalia: Madaxweynaha Maamulka Muqdisho oo kulan la qaatay ergeyga gaarka ah ee Museveni. - Wargane News
Home Somali News Somalia: Madaxweynaha Maamulka Muqdisho oo kulan la qaatay ergeyga gaarka ah ee...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaaatay Ambassador James Baba oo ah ergeyga gaar ah oo ka socday madaxweynaha dalka Uganda ee Museveni.
Kulanka ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho.
Mudane Xasan Sheekh maxamuud iyo ergeyga ayaa ka wadahadley arrimaha dib u dhiska ciidammada Soomaaliya, doorashooyinka ka dhacaya dalka sannadkan iyo dhinacyada kala duwan ee labada dal ay iska kaashan karaan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa dhambaal qoraal ah ka helay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Uganda Yoweri Kaguta Museveni, kaasi oo soo gaarsiiyey Ambassador James Baba.
Dhambaalka ayaa ku saabsanaa sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga labada dal ayaa waxaa Madaxweynaha soo gaarsiiyay Ambassador James Baba oo ah ergey gaar ah oo ka socday Madaxweyne Museveni.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ergeyga ka codsadey inuu salaan iyo mahadnaq ka gaarsiiyo Madaxweyne Yoweri K. Museveni iyo shacabka Uganda sida ay mar walba u garab taagan yihiin Soomaaliya.